Reviews | Little Korea BBQ | South Okkalapa | Yangon | yathar
2018.10.22 Lunch 10,000-20,000 4
စားလို့ကောင်းတယ်… customer တွေအပေါ်လည်းအမြဲ stand by ဝန်ဆောင်မှုရှိတယ် … အသားတွေရော ပင်လယ်စာတွေရော လုံးဝ အမိုက်… ဆိုင်လေးနည်းနည်းကျဉ်းတာတစ်ခုပါဘဲ… ကျန်တာအကုန်ကောင်းတယ် … ❤❤
2018.08.27 Lunch 10,000-20,000 3
၈လပိုင်းမှာ​တော့ 30%​လျော့တယ်​ဆို​တော့ပိုတန်​တာ​ပေါ့​နော်​ သူနဂို​ဈေးက 13800ကို ၃၀ရာခိုင်​နူန်း​လျော့တယ်​ tax က service နဲ့ government ကို 10%​ပေါင်းတယ်​ဆို​တော့ တန်​တယ်​လို့ထင်​တယ်​ ပုစွန်​​တွေလဲအကြီးကြီးပဲ အကြိုက်​ဆုံးက သုံးထပ်​သားကို ​ဆော့စ်​ စမ်းထားပီးကင်​ရတာ​ပေါ့​နော်​ တခုပဲနဲနဲ​ညှော်​တယ်​ အ​ညှော်​စုပ်​စက်​ရှိ​ပေမယ့်​လဲ မနိုင်​ဘူးထင်​တာပဲ
Serviceလဲ​ကောင်းတယ်​ သွားမယ်​ဆိုရင်​​တော့ booking ကြိုလုပ်​ထားမှအဆင်​​ပြေမယ်​​နော်​
2018.08.26 Lunch within 2,500 4
The taste is very good and these dishes are very fresh.
2018.08.25 Dinner 5,000-10,000 4
I like this restaurant Buffet styel
2018.08.20 Dinner 10,000-20,000 4
I like fresh prawns and marinated pork slides. It’s worth to go and eat.
2018.08.20 Lunch 10,000-20,000 4
BBQ အကင်နဲ့ ကိုရီးယားစာတွေအဓိကရပါတယ်။
Buffet စနစ်ကိုအချိန်ကန့်သတ်ချက်မရှိတော့ အေးအေးဆေးဆေးစားရုံပါပဲ။
ဘူဖေးထဲမှာတော့ ဝက်ဗိုက်သား၊ဝက်သား၊ကြက်သားကို ဆော့ဆမ်းထားတာတွေ၊ အမဲသား၊ ပင်လယ်စာတွေပါပါတယ်။
ဘေးက ထည့်ပေးတဲ့ ကြက်ဥပေါင်းလေးကတော့အတော်စားကောင်းတယ်။ ကျောက်အိုးထမင်းပူလေးကလဲစားလို့တော်တော်ကောင်းပါတယ်။ ကင်မ်ချီဟင်းရည်ကိုတော့ သွားစားတုန်းကမပူတော့ သောက်လို့မကောင်းခဲ့ဘူး
2018.08.13 Dinner 10,000-20,000 5
ဈေးနဲ့စားရတာ တန်တယ်။ အရသာလည်းကောင်းတယ်။ ဆိုင်ဝန်ထမ်းတွေကလည်း ဖော်ရွေတယ်။ နောက်ဆို Little Korea မှာပဲ စားတော့မယ်။
စားဖူးသမျှထဲမှာ အကြိုက်​ဆုံးပဲ ကိုယ်​​တွေလို ကိုရီးယားဆန်​ချင်​တဲ့ သူ​တွေအတွက်​​တော့ ကွက်​တိပဲ
Good and delicious all menu on that restaurant and so satisfied of their service and good beer and soju too. You need to try once and I admit that Korea Restaurant will be your favorite.
Tasty Korea BBQ. Buffet is really good performance. I can recommend this restaurant to all users.